Tuulo dalka Kanada ah oo u codeeysay inay kasoo horjeedo in la sameeyo xabaal Muslimiin ah - Horn Future
Tuulo dalka Kanada ah oo u codeeysay inay kasoo horjeedo in la sameeyo xabaal Muslimiin ah
Ottawa (Horn Future)-Dadka ku nool tuulo yar oo kutaala dalka Kanada ayaa u codeeyay mashruuc lagaga soo horjeedo in laga sameeyo xabaasii ugu horeeysay ee ay yeeshaan oo ay ka shaqeeyaan dadka Muslimiinta gobolka Quebec.
Waxa kaliya oo xaq u leh inay codeeyaan 49 qof oo daris la ah goobta ay ahayd in laga sameeyo xabaashan oo ah meel kaymo ah oo kutaala Saint-Apollinaire,iyada oo 36 kamid ah dadkan ay u codeeyeen inay kasoo horjeedaan,sida ay sheegtay warbaahinta Kanada.
Madaxa tuuladan oo ay nool yihiin dad lagu qiyaasay 6,000 ayaa isagu taageeray mashruuca lagu sameeynayo xabaalahan 1dii bishii May.
Laakiin codsi ka dhanka ah mashruuca xabaalahan oo ay sexeexeen 17 qof ayaa ku filan inay lagama maarmaan tahay in afti loo qaado xabaalahan.
Dadka kasoo horjeeda mashruucan ayaa waxay sheegeen in Muslimiinta ay dhici karto in lagu aaso qaybo kamid ah xabaalaha jira ama mid cusub oo loo oggollaado oo lagu aaso dadka kala haysta diimaha kala duwan oo qaybka yihiin kuwa diinta Islaamka.
Laakiin Maxamed Kesri oo ah afhayeenka u hadlay ururka ka dambeeya mashruuca ee Xarunta dhaqanka Islaamka ee Quebec (Culturel Islamique de Quebec),ayaa sheegay inay lagama maarmaan tahay in Muslimiintu ay ku yeeshaan xabaalo u gaar ah dalka.
Madaxa tuuladan Bernard Ouellet ayaa sheegay codeeyntan ka hor inuu u maleeynayo in sumcada tuuladu ay dhaawacmi doonto,haddii ay dhacdo in loo codeeyo in laga soo horjeedo xabaalahan.
« UAE behind Qatar hacks: report	» Sudan oo sheegtay inay kusoo laabtaan dalka 50 kun oo ah muwaadiniinta ku sugan Sucuudiga